यो फल खान जान्नुभयो भने दाददेखि जन्डिस, मु’टु रोगसम्म चैट ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका – Annapurna Daily
यो फल खान जान्नुभयो भने दाददेखि जन्डिस, मु’टु रोगसम्म चैट ! यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका
On Aug 25, 2021 6,546
एजेन्सी । हर्रो अति औषधीय गुण भएको फल सायद धेरैले चिन्नुभएको नै छैन । यो खासगरी कमलपित्तका रोगीका लागि अति नै फाईदाजनक छ । करेलाको रसमा हर्रोको धुलो हालेर नियमित खाँदा जन्डिस निको हुन्छ । कागतीको रसमा हर्रो मिसाएर लगाउँदा दाद निको हुन्छ ।
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ ०४ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल